Executive Committee of International DRAMA Festival in TOKYO မှ ဦးစီးကျင်းပတဲ့ J Series Festival In Myanmar ...
ဇွဲကပင်ယူနိုက်တက်အသင်း နဲ့ ရတနာပုံအသင်းတို့ဟာ 2020 MPT Myanmar national league 2020 ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်းမှာ ကစားခဲ့ပါတယ်… ပွဲအပြီးမှာတော့ ရတနာပုံအသင်းက ဇွဲကပင်ယူနိုက်တက်အသင်းကို ...
ကမ္ဘာ့အခမ်းအနားဆုံး Mrs Universe 2019 ရွေးချယ်ပွဲကြီးမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကနေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ကြတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် (၉၀) ကျော်ထဲကနေ အိမ်ထောင်ရှင်မယ် စကြဝဠာဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့ ...
မြန်မာကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ (၂၀၂၀) သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဆာကူရာ ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်… သည်အခမ်းအနားလေးကိုတော့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ ...
Global Game Jam 2020 စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ ၊ MICT Park မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ကြီးမှုးပြီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်… သည်အခမ်းအနားလေးကတော့ ...
ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ Junction Square မှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်နေ့)က3vs3Soccer Myanmar 2020 ပြိုင်ပွဲကို ...
Hair & Makeup ပိုင်းမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တစ်ယောက်အဖြစ် နှစ်လေးဆယ်ကြာရပ်တည်လာတဲ့ တီချယ်ကြီးဒေါ်ကျင်ပို့ ရဲ့ Fancy House 2020 Annual Press Conference ...
အလှကြိုက်တဲ့ မမတို့ ၊ညီမလေးတို့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ အခမ်းအနားလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ VT Cosmetics Myanmar ရဲ့ Pop-Up Store ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို Junction City မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်..သည်အခမ်းအနားလေးမှာတော့ ...